Goobaha laga xaaraantimeeyey sigaarka oo la sii kordhiyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeerka ballaarinta goobaha sigaarka laga mamnuucay in lagu cabo oo la sii ballaariyey. sawir: Magnus Andersson/TT, Sveriges Radio.
Goobaha laga xaaraantimeeyey sigaarka oo la sii kordhiyey
La daabacay torsdag 27 juni 2019 kl 10.53
Sabtida iyo axadda foodda innagu soo haysa ayaa ugu dambeeya in sigaar lagu cabi karo goobo badan oo horey loo ogolaa, sida barxadaha lagu cunteeyo ee maqaayadaha.
Hase yeeshee kolka uu hirgalo xeerkaasi cusub oo bilaaban doona isniinta foodda innagu soo haysa 1-da bisha luulyo ey weli mugdi ku jiraan waxyaalo badan sidii xeerkaasi loo fulin lahaa.
Baaris ay middaa ku sameeysay laanta wararka Ekot ayay u caddaatay in xeerku yahay mid uu mugdi badani ku jiro. Sida in maqaayadleeydu masuul ka yihiin inaan barxaddooda sigaar lagu cabin, xitaa kolka ay maqaayaddoodu xiran tahay.
– Imisa mitir ayaa laga fogaanayaa barxadda? Maxaa loo baahan yahay in laga fekero? Dhibaatada uu xeerkani leeyahay ayaa ah in aaney jawaabuhu ku qorneyn. Kuma qorna inta mitir, muhiimadduse waxay tahay un in macmiilka aanu soo gaarin qaaca sigaarku, sida uu sheegay Bernadett Wéber, ahna madax waaxeed laanta cimilada ee magaalada Göteborg, mar ay wareeysi la yeelatay Josephine Freje oo ka howlgasha Ekot.
Wasiiradda arrimmaha bulshada Lena Hallengren oo warreeysi saaka siisay laanta idaacadda ee P1-morgon ayaa sheegtay in loo baahan yahay in muhiimadda la siiyo danta laga lahaa dejinta xeerka:
-Danta xeerka laga lahaa in la eego, waxay ku saabsanayd in qaaca sigaarka laga badbaadiyo goobaha bulshadu ku kulanto.
-sida maxadooyinka tareemmada, maqaayadaha. Waxaannu dooneeynaa in la helo bulsho sigaar cabku ku yar yahay. In la dhimo cudurrada uu sigaarku keeno ee kaankarada, cudurrada wadnaha iyo wixii la mid ah, sida ay hadalka u dhigtay.
Josephine Freje, Ekot
Sideed u aragtaa xeerkan lagu mamnuucay sigaarka in goobo badan lagu cabo?